नेपाली गीत सङ्गीत र भूटानी कलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराउने प्रयास: किरण रसाइली – सप्तरंगी एफ एम
Home / अन्तराष्ट्रिय / नेपाली गीत सङ्गीत र भूटानी कलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराउने प्रयास: किरण रसाइली
सायदै कम नेपाली भाषी भूटानीलाई थाहाँ नभएको नाम हो किरण । किरण रसाइली नेपाली भाषी भूटानीहरुका पहिला संगित शिक्षक हुनका साथै बहुप्रतिभाशाली संगितकार पनि हुनुहुन्छ । वहाँको सङ्गीत सृजनामा हामीले आफ्नोपन, आधुनिकता साथ साथै गीतसगँ जीउन सिक्ने कला पाइन्छ । किरणले त्यो शरणार्थी अवस्थामै हुदाँ भूटानी शरणार्थी र शरणार्थी प्रभावित श्रेत्रमा सन् १९९५ देखिनै सङ्गीत सिकाउदै आएको यथार्थ जनमानसमा सर्वविधितै छ ।
किरणको जन्म भूटानको चिरांगमा भएको हो भने सन् १९९०मा शरणार्थी शिविरको टिमाइमा कष्टकार जीवन यापन गर्नुभएको छ । त्यो कठिन परिस्थितिमा पनि किरणले सन् ११९५मा पहिले भूटानी शरणार्थी सांगीतिक समूह Euphoria (94) मार्फत सबै शरणार्थी शिविरमा सङ्गीतको सुन्दर माहौल सृजना गरे जसको कारण थुप्रै युवाहरू सङ्गीत तर्फ लम्कन उत्प्रेरित बने । सन् २००६मा किरणले RIFF संगित विद्यलय स्थापन गरेर औपचारिक रुपममा नेपालमै पहिलो चोटी ABRSM LONDON को संगीत पाठयक्रम गराएको इतिहास छ ।
किरणले सांगीतिक यात्रा दार्जीलिङबाट सुरु गरेका हुन् । त्यस पछाडी वहाँले LONON, Barklee USA र CQU Australia बाट विभिन्न संगीत विषयमा डिप्लोमा र डिग्री हासिल गरि सकेका छन् । त्यती मात्रै नभएर किरणले उत्कृष्ट सङ्गीत साधक Stephen Wilhoit, Jose Antonio र Elena बाट पनि संगीत सिकेका छन् ।
त्यसो त नेपाली भाषी भूटानीहरुद्वारा प्रकाशन भएका एल्बम, र अन्य गिती एल्बमहरुमा आफ्नो संगित दिइसक्नु भएको छ । एउटा जीवन्त कला सङ्गीत मार्फत पनि सिक्न सकिन्छ । यतिमात्र होइन, भूटानी गायक किशोर शिवाकोटीको पहिलो एल्बम “भूगोल” देखि लिएर नेपालका चर्चित गायक शिव परियारले गाऐको “आमा” र वरिष्ट गायक दीप श्रेष्ठले “सपना”मा किरणको उत्कृष्ट आधुनिक सङ्गीत सृजना भएको पाइन्छ ।
२०१० मा किरण पुनर्वास भएपछि अस्ट्रेलियामा बसोबाँस गर्दै आएका छन् । र हालैमा SUB का पूर्व यूवा नेता, समाज सेवी मुक्तिराज गुरुङ्ग को नेपाली शब्दमा किरणाले नेपाली संगीत इतिहासकै पहिलो Fusion संगीत ए योद्ध हो(O Warriors !) सिर्जना गरेका छन् । यो संगीतमा अस्टेलियाबाट विश्वमै नाम चलाएका संगीत साधक साथै अमेरिका र दाजिलिंगका उत्कृष्ट संगीतकर्मीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
ए योद्ध हो(O Warriors !) लाई सुन्नका लागि विश्व बजारमा चलिआएका Itune, Spotify,Googleplay , Applemusic लगायत विभिन्न डिजिटल माध्यमार्फत डाउलोड गरि किन्न सकिन्छ । र यस गीतलाई APRAAMCOS मा दार्ता समेत गरिएको छ । गीतमा नेपाली पारम्परिक बाजा बासुरीका साथ गीतलाई सुन्दर तरिकाले सजाएको पाइन्छ । साथै अस्ट्रेलियाका नामी कलाकर्मीको मिठो बाजाबाट गीतलाई अति कर्ण प्रिय बनाएको छ । सुन्दा नै आर्चय लाग्न सक्छ । कतै एउटा सुन्दर कथामा चलचित्रको भावसगँ गीत गुञ्जिरहेको पाइन्छ । थप गीत सम्बन्धि अर्जुन प्रधानले संगितकार किरणसगँ गरिएको अन्तर्वार्ता :
तपाईको सङ्गीतमा रहेको यस गीत दर्शक श्रोताहरुले किन सुन्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
यो सङ्गीत नेपली सङ्गीत इतिहासमा पहिलो चोटी अन्तरास्ट्रिय सङ्गीत बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्तरको बनाइएको छ । र मुक्ति गुरुङ को नेपाली सब्द रचनाले सबै श्रोताहरु को मन छुन्छ । यो एउटा यस्तो सङ्गीत हो जुन संगीतमा विशिष्टता,आधुनिकता र नेपालीको मौलिकता झल्काइएको छ । त्यसैले सबैले एकचोटी सुनेर साथ दिए, सायद नेपाली सङ्गीतलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सपना देखेको छु ।
तपाईको उद्देश्य के छ? र कसरी यस गीतले विश्वब्यापी कायम गर्ने सक्छ जस्तो लाग्छ?
म सङ्गीतलाई पूजा गर्ने एउटा सङ्गीत साधक हुँ । मैले संगीतलाई पैसा को रुपमा कैले पनि हेरिन तर संगीत मार्फत बिश्वमा नेपालीको एउटा छुटै परिचय दिने सपना चाही बोकेको छु र नेपाली संगीतलाई विश्वव्यापी गराउने मैले मेरो सांगीतिक यात्रा को एउटा ठुलो लक्क्ष् बोकेको छु । त्यसैले यो मेरो लक्ष्य र सपनाको पहिलो प्रकासन हो ।
मुख्यतः यस गीतर संगित भित्रको संदेश चाही के छ ?
छोटकरीमा भन्नु पर्दा यो गीतको मुख्य विषय व्यक्तिगत आत्मसम्मानलाइ बढाउने हो भने संगीत र संगीत संयोजनले अनेकतामा एकता को संदेश बोकेको छ ।
नेपाली गीत सङ्गीतलाई नौलो रुपमा Rock world Fusion को उपमा दिदै अन्तराष्ट्रियकरण गर्दै हुनुहुन्छ नी ? कतिको खुसी हुनुहुन्छ ?
यस आधुनिक ग्लोबल गाँउमा नेपाली संगीतलाई व्यापक श्रोताहरूमा पुग्नको लागि आफ्नो पारम्परिकबाट शैली बाहिर आउन आवश्यक छ । मैले त यो Fusion संगीत मार्फत नेपाली दौरा सुरुवाल माथि पश्चिमी कोट लगाइदिएको मात्रै हो । अनि विभिन्न उत्कृष्ट संगीत साधकसंग काम गरेर नेपाली संगीत पनि मिठो हुदो रहेछ र नेपालीहरु पनि बिर, बहादुर र कान्छा मात्रै नभएर प्रतिभाशाली पनि हुन्छन भन्ने परिचय दिन खोजेको । खुसि लाग्छ म एउटा नेपाली भाषी भूटानी भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित भएका संगित साधकहरुसंग आफ्नो नेपाली गीत संगीत रेकोर्ड गर्न सफल भए ।
यस गीत कस्ले लेखेका हुन ? र गीतमा के कस्ता बाजाको प्रयोग गरिएको छ ?
अमेरिका को Maryland मा बसो बास गर्दै आएका मुक्ति गुरुङ ले सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई समर्पित गरेर लेखेको कविता “ए योद्धा हो “मा मेरो मास्टरपीस संगीतले सम्पूर्ण नेपालीको गौरव बढाएको छ । यो संगीत मा मैले अमेरिका र अस्ट्रेलियाका विश्व प्रख्यात संगीत साधकहरुसंग संगै दार्जीलिंगका उत्कृष्ट संगीतकर्मीलाई पनि समावेश गरेको छु ।
यो संगीतमा मैले नेपाली लोक बाजा जस्तै मादल, बासुरीलाइ पनि समावेश गरेर आफ्नो मौलिकता झल्काएको छु । त्यती मात्रै नभएर यो सङ्गीतमा अहिलेको अति आधुनिक बाजा संगसंगै पूर्वको लोकप्रिय बाजा हार्मोनियम, तबला, बुद्धिस्ट को तिन्ग्सा अनि चिनेसेको तम तम समेत संयोजन गरेको छु ।
गीतलाई सुन्न र किन्नका लागि के गुर्नपर्छ होला ? र कहाँ कहाँ पाइन्छ?
यो संगीत अद्वितीय आधुनिक नेपाली संगीत हो । यो गीत Online Digital Release हुने छ । यो हलमा Digital Audio Download को लागि मात्रै उपलब्द हुनेछ । दोस्रो चरण भने Youtube हुने छ । यो गीत प्राय सबै digital streaming sites मा गएर सुन्न सकिन्छ जस्तै iTunes, AppleMusic Spotify,Google Play .
कसरी तपाईको शुभचिन्तकहरुलाई यस गित उपलब्ध गराउन सकिन्छ ?
यो गित को Download link मेरो Instagram Facebook र Linkedin मा राख्ने छु । श्रोतहरुले music.bhutan@gmail.com मार्फत मलाई व्यक्तिगत emailपठाएर पनि download link माग्न सक्नु हुने छ ।
कहिले यस गीत विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ त ? र थप केही बताउनुहुन्छ की ?
यो गीत यही January १८ मा इन्टरनेट बजारमा उपलब्द हुने छ । हजुरहरु सबैले Download गरेर सुनी दिनु भए यो संगीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली को परिचय दिन सकिन्छ । यो संगीत मार्फत नेपाली संगीत पनि तेतिकै उत्कृष्टता हुन्छ भनेर विश्वलाइ चिनाउने मेरो एउटा सानो प्रयासलाई हज्रुहरु सबैले साथ् दिनु हुन्छ भन्ने पुरा आसा अनि विश्वास राखेको छु ।अ
Previous: झापाको गौरादहमा निशुल्क स्वास्थ्यशिबिर सम्पन्न
Next: आफुहरुलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न पुर्व जनमुक्ति सेनाको माग